Uyifaka njani iClockworkMod Ukubuyisela kwimodeli ye-Samsung Galaxy Tab p1000 | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ukubuyiselwa kwe-Android, Ingcambu Android, Amacwecwe e-Android, Tutorials
Ngenxa yokusilela kwale nkqubo inike abanye abasebenzisi, ndizilayishe kwakhona iifayile kwaye ndibandakanye notshintsho kwinkqubo, ndiyivivile kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
Inkqubo endizokubonisa yona apha ngezantsi, Iya kusinceda ukuba sincothule kwaye kwangaxeshanye sifakele ukubuyiswa okulungisiweyo kwi Samsung Galaxy Tab, ngokukodwa kwimodeli p-1000.
ukuba ingcambu kwaye ufake i-ClockworkçMod Recovery kweli cwecwe le Samsung, kufuneka nje khanyisa i-kernel ehambelana nohlobo lwakho lwe-firmware, kodwa ukuze ndingazibandakanyi nenkqubo, ndigqibe kwelokuba ndiqale ndikhanyise i-firmware emva koko ndiyisuse ngokusekelwe kule firmware, ngale ndlela ndiyaqinisekisa ukuba uya kuyenza ngokuchanekileyo inkqubo.
Nje ukuba kukhanyiswe kunye nokuvuselelwa okulungisiweyo okufakelweyo sinokwenza, umzekelo hlaziya kuhlobo lwe-4.0.4 Ice Cream Sandwich usebenzisa i-rom ephekiweyo.
Kwelinye inqaku ndiza kukufundisa ukuba uyifaka njani eyona rom yomzuzu yethu Samsung Galaxy Tab, Ayikho enye into ngaphandle kwe Yakha ebusuku i-CM9, Inguqulelo eguqulwe liqela le ICyanogenmod 9 esekwe kwi-Android 4.0.4.
1 Izinto ezifuneka kuqala
1.1 Indlela yokufaka
Eyona nto ifunekayo kukufumana Galaxy Tab, umzekelo P-1000 ngokufikelela kwi Imowudi yokukhuphela, singakujonga oku nge Ithebhu yeSamsug Galaxy icinyiwe, Siza kuyiguqula ngokucinezela i iqhosha lamandla kunye neqhosha levolumu ezantsi, Ukuba isikrini sibonakala ngesimboli etyheli, kunye ne-Android esebenza ngaphakathi, yile nto sinokufikelela okuchanekileyo kwimowudi yokukhuphela.
Nathi kufuneka sibe nayo Abaqhubi be-Samsung bafakwe ngokuchanekileyoUkuba awazi ukuba uzifakile ngokuchanekileyo, zikhuphele kule khonkco kwaye uzifake kwakhona.
Okokuqala kuya kuba kukukhuphela zombini i-firmware kunye nefayile ye- Ingcambu yeCF okanye iKernel eguqulweyo, ifayile equlathe ifayile ye- ClockworkMod Recovery, siya kuyidinga le nto idata kunye ifayile yomgodi
Kuya kufuneka sikhuphele isixhobo esifanelekileyo senkqubo yokudanyaza Ukusuka kwesi sisiphelo, kwaye ayikho enye ngaphandle kwe-odin1.7.
Nje ukuba zonke iifayile zikhutshelwe Siza kubavula kwifolda entsha kwidesktop yeWindows.
Ukuba kukho nayiphi na ifayile ebuza igama eligqithisiweyo, zama zamfirmware.com.
Siya kuba nento enje:
Ngoku Siza kuqhuba i-odin 1.7, ngenxa yoku siya kubeka phezulu kwaye Siza kuyiphumeza ngokunqakraza kwiqhosha lasekunene le mouse kunye nokukhetha ukhetho yenza njengomlawuli.
Siza kucofa iqhosha le-PDA kwaye siya kukhangela ifolda entsha yenziwe kwidesktop ifayile .tar ehambelana firmware, emva koko siza kucofa ukhetho lwe-PIT kwaye siza kubeka iPIT ekhutshelweyo, kuya kufuneka siyijonge Ukwahlula kwakhona kuhlolwe.
Yonke into kufuneka ibe njengoko ndikubonisa kule nto umfanekiso weskrini:
Ngoku siza kucima ifayile ye- Ithebhu ye-Samsung Galaxy kwaye siza kuyilayita kwimowudi yokukhuphela, siya kuyidibanisa nge-usb kwikhompyuter kwaye siza kucofa kwiqhosha lokuqala.
Ngelixa inkqubo ekhanyayo iqhubeka, akufuneki sichukumise nantoni na, Sukuyicima ikhompyuter kwaye ungayivumeli ukuba iye kulala okanye ime, le nkqubo ihlala ihlala ijikeleze imizuzu emihlanu, iya kugqitywa nini odín sibuyisele igama elithi Pass kwicala lasentla lasekhohlo.
Nje ukuba ugqibile ukufaka i-firmware, Siza kuphinda singene kwimowudi yokukhuphela kwaye siya kuyidibanisa kwakhona ne-odín, ngeli xesha kwiqhosha I-PDA iya kukhetha ifayile ye .tar engaphakathi kwifolda yedatha kwaye siya kujonga loo nto Ukwahlula kwakhona akuhloliswanga, ngeli xesha Ukwahlula-hlula ukhetho akufuneki kukhethwe.
Siza kucofa kwiqhosha lokuqala kwaye siya kulinda inkqubo ukuba igqibe.
Nje ukuba ugqibile, ukusuka kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, siya kwenza ifayile ye Sula i-cache kwaye Sula idatha / ukuseta kwakhona kwefektri, emva koko siza kuqala ngokutsha ngesiqhelo kwaye siya kuba nohlobo Inkqubo ye-Android 2.3.3.
Ngoku xa iqala kwakhona, Kuya kufuneka sifake iKernel eguqulweyo kunye nokubuyiselwa kweClockworkMod, kuba siza kuphinda sisebenzise i-odin kwaye siza kucofa kwi Iqhosha le-PDA, ngeli xesha kuphela Siza kukhetha i-TAR ethiye ngaphakathi kwifolda yeCFRoot.
Kubaluleke kakhulu ukuba uqinisekise ukuba ukhetho Ukwahlula kwakhona akuhloliswanga ngeli xesha, NDIPHINDE NDIPHINDE, ukhetho Ukwahlula kwakhona akufuneki kuhlolwe.
Siqhagamshela kwakhona isixhobo kwimowudi yokukhuphela i-USB kwikhompyuter kwaye ucofe kwiqhosha lokuqala, ngeli xesha inkqubo iya kuthatha ngaphantsi komzuzu.
Ngoku sine I-Samsung Galaxy Tab okanye i-p1000 nge Android 2.3.3, kunye Ukubuyiselwa kwakhona, nendele kwaye ukulungele ukutshintsha iirom eziphekiweyo.
Emva koko ndiyakushiya Qhagamshela kufundiso lwevidiyo apho unokubona ukuba ilula kangakanani inkqubo ye- Ukubengezela kunye nokufaka iwotshi:
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uluhlu lwe-Samsung Galaxy Tab luya kufumana i-Android 4.0 kwiiveki ezizayo
Khuphela - iFirmware JQ1, ICFRoot JQ1, gt-p1000_mr_PIT.zip, dbdata.zip I-Odin 1.7, Abaqhubi beGalaxy Tab
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » Indlela yokuqalisa kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwi-Samsung Galaxy tab p1000
Izimvo ezi-147, shiya ezakho
Abahlobo kunye nofundiso lwakho I-brickeo ithebhu: /
Ukuba nomhlobo, ukuba awuyazi into oyenzayo ukuze ubandakanyeke, esi sifundo asithethi nto, nokuba ngubani na ongazenziyo izinto ngendlela ekufuneka eyenzile.
Nokuba kunjalo ndixelele ukuba kwenzeka ntoni kuwe ukuba kukho isisombululo.
Umbuzo. Kwisifundo, ekuqaleni kwakhona ithi ngokubeka ifayile ye-PIT, nangona kunjalo kwi-skrini akubonakali ngathi loo parameter igcwalisiwe kwaye ayitsho kwividiyo. Ke, kufuneka senze ifayile yePIT okanye cha?
Molo uFrancisco, ndinombuzo, ndicinga ukuba awunanto yakwenza nesi sifundo kodwa kuyabonakala ukuba ukrelekrele kakhulu kwaye uyingcali kolu hlobo lwento, ndinetafile ye-galaxi 2 kwaye ngalo lonke ixesha ndiqhagamshela itshaja i-X ibonakala nokuba andiyidibanisi ne-electretical current, iyavela ,, ukutshaja kwaye yonke into ilungile xa ndiyifaka, ndifuna ukwazi ukuba iphi ingxaki kwaye ndiyisombulula njani. Ibhetri igcina into ekufuneka igcinwe kwaye ihlawulise ngokwesiqhelo (ngokwexesha lokuthetha) iinkcukacha ziqulathe i-X endiqinisekile ukuba ngokuhamba kwexesha kuya kuzisa iziphumo ezibi kakhulu. Ukuba ungandinceda ngaloo nto, ndingayixabisa ngokwenene.
Molo uFrancisco, ndizamile ukufumana i-JQ1 firmware ukuyisusa i-samsung galaxy tab p 1000, ngokwesindululo sakho kwaye andisifumani, ungandinceda undixelele ukuba ndingasifumana phi okanye nceda undithumelele ikhonkco ukuze ndiqhubeke ngoqeqesho lwakho, enkosi kakhulu
Siya kwii-brickeados ezi-2
Ndinike enye idatha.
Ndiyenzile kwithebhu yam amatyeli aliqela kwaye ndihlala ndilungile, akukho ngxaki.
Inokuba wenza into engalunganga.
Ngaba unayo indlela yokukhuphela imowudi?
Ahh kwaye ungasebenzisi igama elithi uBrick kancinci, kuba isitena nodaka kuxa i-terminal ingenaso isisombululo.
Unyanisile, yayingezizo izitena, nje semibrick.
Ndibuyele kuhlobo lwangaphambili kunye no-Odin, kwaye okwangoku ndiza kuyishiya kuloo nto.
Yeyiphi ingxelo onayo ngaphambi kokuba wenze inkqubo?
Sele ndibhale kwiposi elandelayo ye-ICS, njengoko benditshilo kuyo, ndalandela i-tuo yakho kwaye andinakuyiqala, ngokufanelekileyo isitena esincinci ukusukela ukuba ibifakiwe kukhuphelo kunye nemowudi yokubuyisela kwakhona. Kwafuneka ndikhanyise kwisitokhwe, i-JM6 ene-android 2.2 kwaye yabuya yabuya emva koko ndabuyela ekulandeleni isifundo kwakhona kwaye kwakhona into enye, kwaye ngoku kuya kufuneka ndiphinde ndiyenze into yokubuyisela.
Ngaba ikhona indlela yokwazi ukuba ithebhu yam ayamkeli i-rom yakho, sele ndikuxelele ukuba ayiqali kuwo nawaphi na amanyathelo.
Isithuba sam yivodafone i-p1000.
Ndiyathemba ukuba ungasibamba isandla, ayisiyiyo ukuba ndiyamthandabuza umhlohli kodwa kuya kuba kuhle ukwazi ukuba ithebhu kufuneka ikwi-2.2 okanye i-2.3 eyayilicala lam. Enkosi
inyathelo lokugqibela uyenza ngaphandle kokwahlulahlula okuphawulwe?
Ewe, njengoko ubonisile kwisifundo, xa usithi akuqwalaselwanga ukuhanjiswa, kufuneka ukuba iithebhu iqale ngaphambi kokufaka iwotshi_ukufumana, akunjalo? Ewe ndiyakuxelela, ayiqali emva kwenyathelo lokuqala okanye lesibini.
Molo… ndilandele imiyalelo kodwa ndinengxaki:
> Kwi-PDA khetha ifayile P1000XXJQ1_P1000XXJQ1_P1000XXJPZ_HOME nakwi-PTI gt-p1000_mr.pit.
Ngoku isixhobo asivuli. Ndingenza ntoni?
Ngendlela ... ayiqali ngemowudi yokukhuphela nokuba ... 🙁
Zama ukuyifaka kwimowudi yokukhuphela kwaye uqhubeke nenqanaba lesibini, khumbula ukuba esi sifundo siyimodeli ye-p1000 ye-GSM
Ngoku kuya kufuneka wenze amanye amanyathelo amabini
UJorge Herrera sitsho
Molweni nonke, ndalandela amanyathelo kwileta kodwa ukugqiba kwam inkqubo kwavela umyalezo usithi dlula kwaye kwibhokisi engezantsi ithi (inkqubo igqibezela iimpazamo 0) kodwa ithebhulethi yam inesikrini esimnyama, iyavakala kodwa ayiniki mfanekiso njengoko ndinokuyilungisa, ndincede enkosi !!!
Phendula kuJorge Herrera
Phinda le nkqubo kwasekuqaleni kwaye unike ingqalelo ukuba ungayeki ukwenza nantoni na
kulungile mhlobo wam ndiyenzile kwakhona iscreen esimnyama kwakhona: p, sendifundile ngenyameko inyathelo ngenyathelo kwaye ndenza yonke into njengoko uchaza kodwa andinakukwazi, ndibeke i-firmware yayo yokuqala kwaye ndingayibuyisela ebomini yena yi (Samsung gt p-1000n ethengwe eCosta Rica andazi ukuba inento yokwenza nento) Undicebisa ntoni kwaye ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho.
Kungenzeka ukuba une-bootloader evalelweyo engenisa ii-xdadevelopers kwaye ufake le apk:
Imalunga nephepha eliphakathi lokukhuphela ngokuthe ngqo.
Emva koko unokukhanyisa i-dfroot kwisixhobo sakho
Ndizakuzama umbulelo man !!
Mfondini ndifuna uncedo lwakho, ndiyenze kakuhle yonke inkqubo. Kodwa ithebhulethi ihlala kwiscreen esimnyama kwaye ngezitshixo zamandla andazi ukuba ndenze ntoni
Nceda ulinde impendulo yakho, ithebhulethi ayifuni ukusebenzela mna, nceda
Yeyiphi imodeli yethebhulethi onayo kwaye yeyiphi ingxelo ye-Android onayo?
Cwaka ndiye ndakwazi ukukulungisa, ndikhuphele i-firmware engqinelanayo kwaye iphinde yasebenza 🙂
Ndonwabile mhlobo, ngaba ungagqabaza ngemodeli yethebhu yakho, yeyiphi inguqulelo onayo kunye namanyathelo owalandeleyo ukuyifumana kwakhona
Uya kuthi ke uncede abanye abakwimeko efanayo.
apha ngasentla ndashiya inkqubo endizisebenzisayo kwaye yandilungela, ithebhulethi yam yayithenga eCosta Rica ngenxa yoko kodwa ndayibuyisela ebomini nayo
Molo mfondini, andazi nokuba sowuyisombulule, kodwa kwa into enye yenzeke kum namhlanje, kwaye into ibisenzeka yile yokuba le nkqubo bendiyifaka ibingeyiyo echanekileyo. Ndenze oku kulandelayo, njengoko yonke into ibimnyama, cofa iqhosha lokucima ndide ndazi ukuba sele icimile, emva koko ubaleke u-odin kwaye uqhagamshele ithebhu, cinezela amandla ngakumbi ivolumu ezantsi kwaye ulinde ide i-odin indixelele ukuba sele ndiyazi Ibhokisi encinci ibonakala ikhanyisa ityheli kwi-odin, jonga inkqubo efanelekileyo yokusebenza kwimeko yam inguqulelo yesiLatin jp7, uyibeke apho kwaye xa uyenza ngokutsha yayilungile. kodwa uguqulelo lwam lwe-2.2 ii icon zibonakale ngathi ziphila ngakumbi okanye andazi ukuba zizinto zam na
Molo apho! NdineP1000L, iyandisebenzela nayo?
Hayi esi sifundo si-p-1000
Ewe ithebhulethi yam yi-gt g-p-1000n ene-BLACK SCREEN emva kokuzama ukuyivuselela.Ukuze uyifumane kwakhona into oyifunayo yile Odin1.7 (leyo ikhutshelwe kweli phepha) i-firmware idlula apha http://115.com/file/bh10wagn (Ngumncedisi waseTshayina kodwa usebenze kakuhle kum, xa bengena kwiphepha bakhetha ibhokisi eluhlaza eya kulingana nokukhutshelwa SIMAHLA: p) kunye nefayile yePIT endinokuyilayisha ukuba iyehla kwaye ndiyenza kwakhona -up. Sifaka ithebhulethi kwimowudi yokukhuphela (ukuba akukho nto uyibonayo kwiscreen, ungakhathazeki xa uvula i-odin kwaye ucofe i-VOL- + Power + Iqhosha lasekhaya, siyayixhuma kwi-PC kwaye i-odin iyayiqonda ngebhokisi etyheli COM03 in Ityala lam, ukuba ayiyiboni ndiyacebisa ukuba uvule ibhalbhu esegumbini kwaye uyibeke ukuze isibane sibonakalise kwiscreen secwecwe kwaye ukuba ujonga i-engile elungileyo ungayibona unxantathu omthubi nge I-androit ngaphakathi ngoku ukuba siyayixhuma kwi-PC okanye ukuba awuyiboni, zama de ukuba i-Odin iyamkele kwaye ilandele amanyathelo angezantsi) 1-JONGA iibhokisi zokwahlula kwakhona, ukuqala ngokutsha ngokuzenzekelayo kunye nexesha lokubuyisela kwakhona, 2- emhadini sikhetha iifayile esizikhuphelayo kuMlilo woMlilo, i-3-Kwi-PDA sikhetha iFayile ekhutshelweyo kwiseva yamaTshayina kwaye sinika iqhosha le-STAR ukuba silinde ithutyana kwaye kufuneka ndibuyele ebomini ndiyathemba ukunceda abantu ndinengxaki efanayo nale bendinayo!
Molo wamhle Jorge, uneefayile kwenye indawo ... ngena kwaye andiboni ukuba uzikhuphele njani, ndingayivuyela intsebenziswano yakho
Azisekho kwiserver yaseTshayina, apha ungayifumana ifayile ye-firmware eya kuthi ibuyisele iP1000N yakho ebomini:
Uyilo lweArtegrafico_1987 sitsho
Enkosi ngokulayisha ifayile, indincede kakhulu.
mhlobo ungandifunela i-GT-P1000L
Jorge, molo ndinengxaki kwaye undixelele, ngaba ithebhulethi yakho iseqhelekileyo? ubusayingcambu? Masinwabe
UCatalina Donado sitsho
Phendula uCatalina Donado
Irabha 131 sitsho
Ubusindisile ubomi bam inyani kuphela kwento enokundonwabisa
ukwelinye inqanaba lamadoda
isebenza kuhlobo lweP1000L ????
Hayi, i-terminal nganye inenkqubo yayo eyahlukileyo
Kuthekani ukuba ndiyenzile nge-p1000l? Ndiphila njani? ... yhu ...
Yiya ku-smobile.com ubhalise kwaye ushiye i-odin, i-firmware ehambelana nesiphelo sakho kwaye uyiphinde uyilayite kwakhona.
Molo mhlobo, awuzukuba nethuba lokuphinda ufumane i-p1000l?
Nge-12/09/2012 ngo-04: 39, «Disqus» wabhala:
Ndinayo kwaye ndalandela amanyathelo owabeke kuwo kwaye ayiqali kum! Sisiphi isisombululo osinika sona?
Uxolo nge p1000n
Ndiyifumana njani i .p1000n ukuba ayisebenzi kum? Andikwazi ukuyifumana naphi na, ndincede enkosi.
Ndidinga ukubuyiswa kwemowudi yewotsword ye-p1000n
Ndilungiselela isifundo kwi-p1000n.
ke hlala ubukele
Kwaye awunakubeka esinye isifundo kwi-P1000L? Ndiyabona ukuba sibaninzi kwaye akukho ndawo apho sifumana nantoni na ukusikhokela. Enkosi
Ndizakuzama mhlobo wam.
Ngaba ukulungele ukufaka kwi-p1000n nge-odin ??? ngeheimdall ayisebenzi kum, indinika impazamo -12, nceda uqinisekise ukuba unganakho na kwi-1000N nge-odin !!!
Kwi-P1000n oku kulandelayo kundisebenzele: https://www.androidsis.com/como-instalar-el-recovery-a-la-samsung-galaxy-tab-p1000n/ Le yangoku indishiyile ingasebenzi, kunye nenye ndiyisombulule,
Ndizamile, kodwa indinika impazamo i-heimdall -12, inokuba yintoni? Ndinabaqhubi abafakelwe kakuhle ukusukela ndayibuyisela ebomini xa yafa ndizama ukuyibeka kwaye nge-odin ndiyibhale kwakhona ukuya ku-2.3.3. 4.0, kodwa ndifuna ukufaka ukubuyisela kwakhona ukuze ndibone ukuba ndiyilayishe kwi-XNUMX, enkosi
Ndifuna ukwazi into xa ingcambu yenziwe, ayiyiboni iSIM khadi, ngaba uyazi ukuba inokuba yintoni?
URenzo beretta sitsho
Le mod isebenzela i-P1010? ... uxolo lokungazi kwam xD ...
Phendula kuRenzo Beretta
UIvan Bourse sitsho
Umntu undincede !!!!!!!, ndilibele ukujonga ukwahlula kwakhona kwaye ngoku ayisijiki. Iqabane? !!!!!!
Phendula u-Ivan Bourse
UAndres Liu sitsho
Ndibhale umbuzo kodwa kwinto endiyibonayo ayiveli ... Okokuqala, enkosi ngawo wonke umsebenzi omangalisayo ohlala uwenza. Kwaye okwesibini. Sele ndinetablet yam p1000 ingcambu, yasimahla kunye ne-cyanogen mod9. ngoku umbuzo izolo ndibone ukuba bakhuphe olunye uhlaziyo kwi-cyanogen ngobusuku kwi-p1000. Ukuyifaka kufuneka ndenze onke amanyathelo afanayo okanye i-Odin nje. I-PDA kwaye ndilayisha entsha? Ndiyabulela kakhulu.
Phendula u-Andrés Liu
Ukuba i-rom nigthly kuyakufuneka ukope kuphela i-zip kwi-sdcard yangaphakathi yethebhu kwaye uyikhanyisele ekubuyiseleni
Ithebhu yam yomnyelethi i-p1000 ishiyeke nekhusi elimnyama, ndiyiva ivula kodwa akukho nto inokubonwa, ungandinceda?
undisombulule njani nam?
Oko kwenzekile kum kuba ilaptop icinyiwe xa bendihlaziya (andiyongcambu) kuye kwafuneka ndiyivule kwimowudi yokukhuphela kwaye isuka kwi-kies ukuze ndiyivuselele kwakhona kwimowudi yempazamo yokuhlaziya i-firmware okanye into enjalo
Luisrose nakum, usombulule njani?
Ndenze inyathelo ngenyathelo, kodwa khange inike i-PASS kodwa isilele, ngoku kubonakala ngathi isitena, ndenza ntoni ????
Xa inyathelo "Xa ugqibile, ukusuka kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, siya kwenza Sula i-cache kwaye Sula idatha / ukuseta kwakhona kwasefektri, emva koko siza kuqala kwakhona ngesiqhelo kwaye siza kuba nohlobo lwe-Android 2.3.3" kwaye ndizamile ukungena kwimowudi yokubuyisela, yenzekile ungavuli kwaye emva koko ujika kuphela kwiimpawu ezinqamlezayo kunye nescreen esimnyama xa ndiyidibanisa ne-USB, umbuzo ngowokuba ndiphuma njani apha? Ndiyabulela kwangoko!
Ndiyacela. QAPHELA KAKHULU !!! Ngalesi sifundo i-TAB yiBrickea.
Kwafuneka ndimse kwinkonzo yobuchwephesha kwaye bandithatha itikiti elide ...
uyeva !!! Ngaba uya kuba nayo indlela yokwenza ngayo nge-GP-P1000L ene-stock telcel firmware? kuba ndizamile amaxesha ama-2 nge-firmware oyifakileyo kodwa ayisebenzi kum, isikrini sam sihlala simnyama !!! kwaye kufuneka ndifakele i-firmware yoqobo kwakhona
molo usifumene isisombululo?
UMitzchel Z sitsho
Into malunga noku ?? Ndifuna ukwazi 🙁
Phendula uMitzchel Z
Umhlobo olungileyo ndifuna uncedo ndizamile ukwenza kodwa ngoku itafile inesikrini esimnyama kwaye izibane ezingezantsi zikhanyisiwe, umntu angandinceda
Fabiola M sitsho
Ndinengxaki efanayo, andazi ukuba ndithini
Phendula u-fabiola M
U-Esteban Bonetto sitsho
Molo, ndifuna uncedo okoko ndalandela amanyathelo njengoko kuchaziwe apha kunye neefayile ezinxibelelene apha kwaye ithebhulethi yam ayisasebenzi iibhutsi okanye ubuncinci andiboni nto.
Ndilangazelela kuba yeyomhlobo wam kwaye andinakho ukuyibuyisa ndiphinde ndiphinde ndibuyele kwinkqubo ukuze ndibone ukuba ikhona into etsiweyo kwaye ekuphela kwento engaqhelekanga endiyibonayo kukuba kwinyathelo ngenyathelo ithi ibandakanya iPIT nakwelilandelayo umfanekiso iPIT yayingangeniswanga njengoko indlela ingabonakali.
Ndiyongeze njengoko umbhalo wawusithi ndigqibe yonke into, uPass wandixelela emva kokuba iphinde yaqala phantsi kwaye andibonanga enye into.
Enkosi kwangaphambili, ndiyathemba ukuba umntu othile angandinceda.
Phendula u-Esteban Bonetto
Ndinevodafone P1000 yemodeli ye-GSM kwaye okoko ndiyihlaziyileyo ayinxibelelani neSIM.
Faka i-stock firmware kunye ne-odin.
Kwi-smobile.com unazo zonke.
Okanye yenza kwakhona inkqubo ekhanyayo.
Nge-11/09/2012 ngo-12: 41, «Disqus» wabhala:
Kwi-firmware oyishiyileyo akukho fayile ine-.tar extension, ndenza ntoni?
UGuzman Galvan sitsho
Ndenze yonke into ephume kwividiyo kwaye iscreen sihlala blackaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa one ones
Phendula kuGuzman Galvan
ULuishi chaile sitsho
Phendula uLuishi Chaile
U-Lenin Palacios sitsho
Ewe bendifuna ukukubuza ukuba ndingayilungisa njani i-p1010 yam ndiyenzile le nkqubo kwaye ngoku ayivuli iscreen
Phendula uLenin Palacios
UHelmuhd uLuvin Moreno Guevara sitsho
ithebhu yeGalxy 2 GT-P5110 yeyiphi iifayile kwaye yintoni inkqubo
Phendula u-Helmuhd uLuvin Moreno Guevara
Velocity Vp sitsho
Molo ngokuhlwa okuhle, ndinengxaki elandelayo. (Ndine p1000N tab) Ndizamile ukuyivuselela ukusuka kwi-Samsung Kies inyuke isuka kwi-2.2 ukuya kwi-2.3.6 kwaye yahlala ibambekile imini yonke zombini (ukusuka ngo-2pm ukuya ku-8pm) kwi-97% kwaye imo yokukhuphela nayo yanamathela, mna Ndiyicimile kwaye ndiyicimile kwaye ngoku andinako nokungena kwimowudi yokukhuphela, uphawu luvela kwiscreen kwiscreen esimnyama kwaye kwiselfowuni amanqaku amathathu amanqaku onxantathu amanqaku amathathu kunye nekhompyuter NGOKUPHELELEYO NCEDA ...
Phendula Velocity Vp
molo mhlobo umbuzo, ukuba sele ndinayo i-tab nge-Android 2.3.3 kufuneka ndenze njalo
faka ukubuyiswa kweClockworkMod kunye namanyathelo alandelayo kwaye kunjalo? kodwa into yomhadi ayiveli ndawo kwaye ayichazi kakuhle ukuba yeyantoni.
Kude kube izolo bendikunye ne-gingerbread yam ehlaziyiweyo nge-movistar malunga nonyaka ophelileyo kwaye bendicinga ukuba i-android ishiye okuninzi ukuba kungafunwa ngenxa yokungazinzi kwezicelo zayo.
Kwi-htcmania ndandisetyenziselwa ukuba yirobhothi kwaye nditshintsha igumbi lehlabathi kwaye ndandingazi nto kwaphela ngale nkqubo.
Enkosi kuwe sendisele ndingu superuser we android kwaye ndonwabela igumbi 4.1.2 kwithebhulethi yam. Ndinayo intsha kwaye ndiyathemba ukuba ukuvalwa kwesicelo okungalindelekanga kuyaphela.
I-PS: kwi-odin bendihlala ndiyishiya ifayile ekhutshelweyo kwi-PIT.
Mholo! Ndizamile ubuncinci amatyeli alishumi ukwenza inkqubo ngeefayile ezininzi endizikhupheleyo, ndade ndayibuyisela kwakhona i-firmware kwaye ngalo lonke ixesha xa ndifaka ukubuyiswa kwemowudi yewotshi, xa uqala kwakhona isixhobo ekuqaleni isikrini sijikile kodwa akukho mpendulo, emva koko icima kwaye ivele kuphela amaqhosha angezantsi akhanyisiwe kodwa akaphenduli ... Nceda, ndifuna ngokwenene ukufaka i-IceCreamSandwich .. Enkosi ngokundinceda !! Ikhompyuter yam yithebhu yesamsung ye-samsung i-GT-P1000N ene-Android 2.3.3 baseband version P1000NUBJP3 Kernel 2.6.32.7 se.infra@SEP-24 # 2. Ndiyabulela kwangoko…!!!
Phendula ku juancarcol
Mholo ngalentsasa! Ndizamile ubuncinci amatyeli alishumi ukwenza inkqubo ngeefayile ezininzi endizikhupheleyo, ndade ndayibuyisela kwakhona i-firmware kwaye ngalo lonke ixesha ndifaka ukubuyiswa kwemowudi yewotshi, xa uqala kwakhona isixhobo ekuqaleni isikrini sijika kodwa akukho mpendulo, iyacima kwaye ibonakala kuphela izitshixo ezingezantsi zikhanyisiwe kodwa aziphenduli ... Nceda
vor Ndifuna ngokwenene ukufaka i-IceCreamSandwich .. Enkosi ngokundinceda !! Ikhompyuter yam yithebhu yesamsung ye-samsung i-GT-P1000N ene-Android 2.3.3 baseband version P1000NUBJP3 Kernel 2.6.32.7 se.infra@SEP-24 # 2. Ndiyabulela kwangoko…!!! juancarcol@hotmail.com
Molo, ndine-p1000n kwaye ndichithe malunga neveki ndiyiqala kwakhona de yandinika, jonga xa ufaka kwakhona, yenza idatha yokusula kunye nokususa i-cache ngaphambi kokuba uqale kwakhona kwaye kufuneka utshintshe ulwimi kwaye uyaqonda ukuba ukubamba Ayisebenzi ... khangela esinye isithuba pa p1000n sikunye neheidall hayi nge-odin…. kwaye isebenze ngokugqibeleleyo kum !!! nethamsanqa
Abog Eprilhernandez sitsho
Molweni zihlobo! Ndinengxaki nge-My Galaxy Tab GT P1000N, qaphela ukuba ndifuna ukutshintsha i-firmware kwithebhulethi yam kwaye xa ndiyidibanisa ne-odin ndiyifaka kwimowudi yokukhuphela, ukukhanya okumthubi akuvuli kwibhokisi ye-odin; Nangona kunjalo, ukuba ndivula ithebhulethi ukuba ukukhanya kuvuliwe! Ndincede, enkosi kwangaphambili
Phendula u-Abog Eprilhernandez
fakela kwakhona abaqhubi be-samsung kwakhona, kule posi uyakufumana ikhonkco nabaqhubi ukuba bangasebenzisi ii-kies !!!
Ndikushiya ikhonkco !!! http://hotfile.com/dl/133929348/9107244/SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1_3_2300_0.zip.html
oie rizk rsk tc ungandigqithisela ifirstl p100l eqinile kuba ndiyenzile le nkqubo kwaye isikrini sasibamnyama (enkosi kwangaphambili: D)
Ngaba umntu angandinceda kuba isikrini sasimnyama kwaye andisasabeli, yi-gt-1000l kwaye ndingazifumana phi iifayile zokuyibuyisela nge-odin
iliso, esi sifundo senzelwe i-P1000 hayi i-P1000L, nantsi ikhonkco lemodeli yethu kwaye unokuyifumana kwakhona, emva koko jonga ividiyo kumlobi omnye ngendlela yokufumana kwakhona, landela ividiyo kwileta nawe ngekhe ubenangxaki, malunga. http://www.youtube.com/watch?v=zUXVqzA4Yoo&list=UUjzw_bb04gud8EcAWgVyB1w&index=5&feature=plcp
Molo, ndiyenzile inyathelo ngenyathelo, isikrini se-p1000 sam samnyama, ndiye ndenza le nto bayikhankanyileyo ngasentla, kodwa e-Odin ibambekile kulo myalezo kwaye ayenzi nto:
Injini ye-Odin v.3 (ID: 7) ..
Molo kwakhona andikwazi ukuyibuyisela ithebhulethi yam kuba iyi-p1000l kwaye andinayo ifayile elayishwe voa odin ukuba umntu othile undenzele inceba yokundikhokelela ekubeni ndiyivuselele ubuncinci ndingavuya kakhulu xa endithumelela isikrini esimnyama kodwa u-odin uyaqhubeka nokuyiqonda
Mva kwemini, ndine-p1010, ndivela ePeru, isebenza kule modeli… yithebhu yokuqala.
USalvador Mtz. Silva sitsho
Uxolo, ayisebenzi kum, kodwa ndicinga ukuba sele ndichonge ukuba kutheni ... Into eyenzekayo kukuba xa ndidibanisa i-Tab kwi-PC ngentambo ye-USB, kuvela i-Red X kwibhetri. Uyazi ukuba kutheni le ngxaki ifanelekile, kuba ngaloo ndlela ayindivumeli ukuba ndibone ithebhulethi kwiPC yam ukuba unokunceda ndingayixabisa
Phendula uSalvador Mtz. Silva
Kwenzeka ntoni kum malunga ne-X ngentambo engeyoyokuqala, njengoko bendithenge ithebhulethi esetyenzisiweyo, bandinike yona ngetshaja, kwaye ngoku ndithenga eyokuqala kwivenkile yakwaSamsung ayisaveli, kwaye iyadibana njengesilika kunye ne-pc ... leyo.
Molo, kodwa kuyacaca ukuba zonke izinto ezizezokuqala zezokuqala kuba zezona zingene ebhokisini yethebhulethi, ndiyithengile intsha, kwaye zonke ziyimvelaphi yeSamsung, enyanisweni ndiyaqonda ngoku ukuba ndiyayidibanisa Ukutshaja ithebhulethi kuyandenza into efanayo iqale ukutshaja kakuhle, kodwa malunga nemizuzu emi-2, 3 idlula kwaye i-X ebomvu nayo iyavela kwibhetri kwaye ayihlawulisi.
Ukuba umntu angaxhasa, okanye abe nolunye uluvo, ndicinga ukuba inokuba yintsholongwane okanye into, enkosi
Ndiyiphosile, kodwa ithebhulethi iyabiza kwaye idityaniswe kwitshaja
Iindawo zeminquma Iintyatyambo sitsho
Qaphela ukuba kukho into eyenzekileyo ngethala lam lomnyele kwaye isikrini sicinyiwe, ayisiyomboniso, kuyakubakho indlela yokuba undincede ndiyilungise
Phendula iOlivares Flores
Nceda nceda, ndinamava okubulala okwesibini, ngelixa bendigqibezela inkqubo yokuqala sinamandla okusikwa ngokubanzi kwaye ngoku ithebhulethi yam ayivuli, oko kukuthi, ukuba ndigcina iqhosha lamandla licinezelwe emva kwemizuzwana embalwa isikrini siyakhanya kodwa ayikho enye into.
Ukuba umntu angandixelela into emandiyenze, ndiyayixabisa.
Zama ukuqala kwakhona kwimowudi yokukhuphela kunye nokuqalisa kwakhona inkqubo ekhanyayo
Nge-26 kaNovemba ngo-2012 ngo-22: 26 kusasa, uDisqus wabhala:
Ikhonkco leDamian sitsho
isebenzela i-galaxy tab p6200l ??
Phendula uDamian Cadena
UJuan Ramos sitsho
Ndinengxaki ndifumana umfanekiso weselfowuni ukhomba uphawu! Kwaye ikhompyuter ndingayilungisa njani njengoko kukho ukusilela kunxibelelwano lwethebhu kunye nekhompyuter kwaye ingasuswanga kwiselfowuni ndincede enkosi
Phendula kwi-juan ramos
: c ithebhulethi yamnyama kwaye andinakwenza nto uncedo!
molo ndineTablet GT GT-P-1000N VERSION 2.3.3 Unyana wam ebefuna ukujikeleza nge-odin ethi ngoku xa evula indawo yokuchukumisa ingasebenzi kwaye nescreen sicime sishiya kuphela izibane ... ... .2.6.3.5.7 se.infra@-49#2 yakha inombolo IGINGERBREAD VFJP6… nceda ukuba ungandinceda. Ubone eminye imiyalezo ngaphambi kuka Mnu. Kwenzeka into efanayo kuyo ... kodwa inenombolo eyahlukileyo yekernel kwaye kuba andiqondi nto ngayo, ndiyiphanda ngoku xa kukho ingxaki ... kuba intsha. kwaye andifuni kulahleka. Enkosi..
Phendula kwi rysana274
URuben Garcia Garcia sitsho
Andikukhuthazi kwaphela le nto ndikuxelela yona bendinayo malunga nenyanga. kwaye ngexesha lokuvuselelwa kobume bendibambekile kwaye ndaphinda ndatshintsha igumbi ngaphandle kokubeka izimvo kwiimpazamo ezininzi kwizicelo ezinje ngebhodi yezitshixo, ikhamera engasebenziyo kunye nokuvalwa kwesicelo kunye nokungqubana kwezicelo zikaGoogle.
Phendula uRubén García García
Molo, i-gt-p1000l imile njani, kwaye ukusuka apho ngawaphi amanyathelo alandelwayo ukuyihlaziya kwi-ICS?
Enkosi !!!! Funda nje ngononophelo kwaye ukhumbule ukuba ndicinga ukuba abanye basilele apho, ifayile yePIT ISETYENZISWA KUPHELA…. kunye nebhokisi yokwahlulahlula kwakhona !!!! Enkosi ! Ukugqwesa, ukusuka kwiFroyo 2.2 ukuya ku-2.3.3 GINGERBREAD <Ndiyazi ukuba ndishiywe lixesha kancinci, kodwa ukuba kukho umntu ofuna naziphi na iifayile jjoelramirez@gmail.com
Molo unjani? Ukukhuphela i-firmware awukwazi ukusombulula ingxaki ukuze ndihlaziye ithebhulethi yam !!.
i-firmware ye-samsung galaxy tab p1ooo ayibonakali kwikhonkco abalinikayo. Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
Nonke nibulale ithebhulethi yam, ndalandela amanyathelo njengoko isitsho apha kwaye ngoku isikrini sam simnyama, ngethemba lokuba into efanayo iyenzeka kuwe kwaye ulahle iidola ezingama-300
molo ngokuhlwa okuhle yile firmware ekufuneka ndiyisebenzisile ??? http://www.hotfile.com/dl/156040525/99cc2b3/P1000XXJQ1_P1000OXAJQ1_ITV.zip.html Umphezulu wekhonkco yevidiyo kuba kwaye ikhonkco elisuka apha kwisifundo alisebenzi? Ndiyisebenzisa okanye uyitshintshe
Dick ngokukhawuleza sitsho
Imibuliso evela eMexico DF Ngaba ndingayenza le nto kwithebhulethi yeGPS P1000L? kunye ne-firmware 2.3.6
Phendula uDick Rush
Into elungileyo yesiphelo kukuba uhlaziya kwi-Android 4.0 okanye ngaphezulu. Ndine-p1000 ene-Android 4.3.1 kunye nenguqulelo yoqobo ye-BBM.
Nge-29/10/2013 ngo-23: 11, «Disqus» wabhala:
Enkosi ngesifundo, kodwa i-firmware andikwazi ukuyikhuphela.
Kukwimithwalo emininzi kwaye andinakho ukuyikhuphela… ndifumana iphepha lokwazisa ngalo lonke ixesha.
Ungaphinda uyithumele kwakhona nceda?
UFabiola M. sitsho
Ndincede ndenze yonke into, kodwa isikrini asivuli kwaye amaqhosha angezantsi ukuba ayangxamiseka. !!!!
Phendula uFabiola M
molo i-p1000n yam ihleli nje iluphu kwaye ayidlulisi umyalezo we-samgsun, ungaphinda ulayishe ikhonkco le-firmware kwakhona ukuze ukwazi ukuyiphinda, zonke ezinye izixhumanisi kule post zisebenza kuphela i-firmware ayifumaneki kwaye samfirware kwaye Indawo yokugcina ababeyibeke kuyo apha ngezantsi kwaye ithi umyalezo ukuba kufuneka ubalinde ukuba bafumane enye indawo yokuyibeka
Uselvin Andino (Tata) sitsho
Ndifuna ukwazi ukuba ingasebenza nemodeli ye-p1000n
Phendula u-selvin Andino (Tata)
H "Hal" Izixhobo sitsho
Ndifuna ukufaka kwi-P1000 yam (ngoku ijikelezisiweyo kunye ne-2.3) ikiti kat cm-11-20140420-NIGHTLY-p1.zip esele ndinayo.
Ungandixelela ukuba ungayifaka njani kwakhona i-CWM yokufumana kwakhona ngoku ndingena kuphela kwinkqubo yokubuyisela i-Android (uyazi ukuba ndicinga ukuba iiCWM ezingaphantsi kwesi-5 zinika impazamo)
Ukuba unombono, ndingavuya.
Phendula ku H "Hal" Izixhobo
Hayi! Ndilibele ukukuxelela ukuba enye yeekhonkco zokukhuphela (enye ebanjelwe kwifilethi) yehlile. Ukuba unokuphinda uyilayishe, ingakulunga, kuba andiyifumani phaya ... uninzi lwazo lubhekisa kwinto enye ... ezinye ... azibonakali ingohlobo olufanayo lwefayile . Enkosi-.
Enkosi… .. Sele ndiyifumene i-CWM efanelekileyo yokuyifaka nge-ODIN (iqhosha le-PDA) http://www.mediafire.com/download/vhhalkik1csl66h/CWM-ROOT-Galaxy-Tab-7.tar
Ukubulisa kwaye kufanelekile nakwezinye. Kwandihambela kakuhle. (Ndayifaka i-CWM, (ndafaka i-3.0.0. Xa uzama i-CM11 rom, yayinguye owahlaziya kwaye waqalisa kwakhona kwi-CWM 6 ... kwaye ukusuka apho inkqubo yesiqhelo ... khangela i-zip kwimemori yakho kwaye ufake. .. Ukubaleka kwaye wonwabe!
UJose Miguel Martinez (@HackGelo) sitsho
Molo Franciso. Ndinengxaki kwithebhulethi yam yaseTshayina enamathele kwi-Android - (kwiphepha elingaphandle ithi a3lgtp1000 yenze i-korea) kwaye xa ndizama ukuseta kwakhona nzima andiyifumani imenyu. i-android ebekwe ezantsi kunye nonxantathu obomvu. ??? Andazi ukuba ndingayivusa njani. ayingeni kwimowudi yokukhuphela.
Phendula kuJose Miguel Martinez (@HackGelo)
Omar HC sitsho
Molo, ungayifaka enye i-firmware?
kukuba andifuni ukufaka ngokungacacanga: /
Phendula uOmar HC
USalguer Cardenas sitsho
molo mhlobo ndingawukhuphela phi umlilo wokubulela ngaphambi kwexesha
Phendula uSalguer Cardenas
Ndinetafile eqhotsiweyo kwaye andinakwenza nto kuba andinayo i-firmware (2.3.3 XXJQ1) ndingayifumana phi? Amakhonkco endiwafumeneyo nawo awasebenzi.
Ndizama ukuvuselela ithebhulethi yam ye-Samsung Galaxy Tab GT-P1000 ngokulandela isifundo https://www.androidsis.com/como-actualizar-la-samsung-galaxy-tab-7-a-android-5-1-1/ endizisa apha kwiingcambu kwaye ufake ifayile yeClockworkMod.
Ngaba unokulungisa ikhonkco lokukhuphela i-firmware okanye ubonise ukuba ndingayikhuphela phi kuba ndingayifumani?
Ikhonkco lokukhuphela i-firmware alisebenzi
Zama eli khonkco:
Molo, kwabo baneengxaki ndiza kwabelana ngamava am:
Xa ndifaka inkqubo, iThebhulethi iqala kwakhona kwaye ayigqithisi i-logo ye-samsung, ndiyisombulule ngale ndlela:
1. fakela le Firmware ine-odin: http://www.sammobile.com/firmwares/download/5214/P1000NUBJP7_P1000NUUBJP7_TTT/
2. Ithebhulethi ayiqali, iyibuyisele kwimowudi yokufaka umthwalo kwaye ihlala ifaka "i-datadata" yefayile ekhankanywe ekuqaleni kweposi kunye ne-odin, emva koku icwecwe liziqinisa kwakhona kwaye lingene kwinkqubo.
3. Faka i kernel eguqulweyo.
Oku kundisebenzele, ndiyathemba ukuba iyabanceda abo baneengxaki
Mholo ngalentsasa. Okokuqala, phawula ukuba mna ndingumqali kolu hlobo lwenkqubo. Ndinqwenela ukuba ndingayihlaziya ithebhulethi yam yeGPS p1000 kwaye emva kokufunda kakhulu ndifumene lo mbuzo ulandelayo:
Okwangoku ithebhulethi yam ine-operating system 1 kwaye ndicinga inyathelo lokuqala ukuyitshintsha ibe ngu-2.2 kwaye emva koko ufake iinkqubo ezitsha zokusebenza ukuya kuthi ga kwi-2.3, nangona kunjalo ndiyifundile loo nto ngokuxhomekeke kwi-firmware efaka ithebhulethi ndinokubambeka. ngo-5 kungekho thuba lokwenza nantoni na kamva.
2.- Ukulandela imiyalelo kwileta ndizamile ukukhuphela ifayile «Firmware JQ1» ayinakwenzeka kuba ukhuphelo alufumaneki.
Ndingabuxabisa ubukho bokukhuphela le fayile kunye nayo yonke inkxaso enokubakho yokuphumeza iinjongo zam.
UAlfonso Rodriguez sitsho
Imibuliso fakela kwaye ukhanyise i-Tab yam kodwa ukuchukumisa kwethebhu kuyayeka ukusebenza ukuba kuyakhanya ukuba ingcambu ifakwe kakuhle kodwa andinakuyenza ngaphandle kokubamba. Ndidinga ukwazi ukuba ususa njani kwaye ubuyele kwimowudi yesiqhelo ukumisela ukuchukumisa okungafakwanga ngaphambi kokuba ujikeleze umnxeba usebenze kakuhle
Phendula u-Alfonso Rodriguez
Kuya kufuneka ufake i-firmware kwakhona ngaphandle kokufaka i-db kunye nemowudi yokubuyisela ixesha
Molo emva kwemini, ndinayo i-galaxy tab yeGT-P1000N, ndingayihlaziya njani? Ndiyabulela kakhulu
Yovany isilika sitsho
Ukubulisa. Ukuba nabani na une-firmware ye-GT-p1000 nceda wabelane ngayo, kwi-samobile.com bayigcinile. https://www.sammobile.com/firmwares/download/13688/P1000BUJQ5_P1000ATLJQ1_ATL/
Phendula uYovany Silva
UMarcos Paz sitsho
Molo, ndinayo i-Galaxy Tab P1000 GSM, kodwa ndinayo yonke into esuka kwividiyo, ngaphandle kweFirmware JQ1, ndiyithathaphi, kuba ndiceba ukutshintsha i-rom ibe ngu-5.1 ozinike yona kwenye ividiyo yokufunda, ukusuka apho Ngaba unokukhuphela olu vimba? Enkosi…
Phendula uMarcos Paz
Ramon Prada sitsho
«» Okokuqala, siya kukhuphela zombini i-firmware kunye ne-CF eguqulweyo okanye iKernel, ifayile equlathe ukubuyiswa kweClockworkMod, siya kuyidinga le datha kunye nefayile yomgodi »». Ndiyabuza: i-firmware elithetha ngayo eli candelo, ngaba ilapha yokukhuphela okanye ibandakanyiwe kwingcambu ye-cf? ukuba akunjalo, ndiyikhangela phi? Ndiyenzile inkqubo njengoko injalo kwaye isikrini sihambe mnyama ngezibane zasekhaya kunye nezinye
Phendula kwi-ramon prada
UEduardo Ruiz sitsho
Xa ndenza zonke iintlawulo, yonke into ilungile, ekugqibeleni kuyafuneka ukufaka iCFRoot kwithebhulethi yam, uTouch uyayeka ukusebenza kwaye ngenxa yoko ayisandivumeli ukuba ndiqhubeke nokumisela isixhobo sam.
Kuthekani ukuba iyandibamba yiClockworkMod Recovery kodwa hayi inkqubo enjalo.
Phendula uEduardo Ruiz
molo, ekuqaleni kwesifundo uthi xa uvula i-odin layisha ifayile ye .tar kwifolda entsha kwidesktop, ndikhuphela zonke iifayile ozithethileyo kwaye akukho nanye kwezi zintathu eza kwifayile ye-.tar. Kukho enye ukhuphelo endingayibonanga. Enkosi
Molo Yesu, ibonakala kanye xa uqhuba i-.exe, emva koko kuya kufuneka ucofe kwi-PDA ukufumana ifayile ye .tar. Ndixelele ukuba uyayibona okanye ayikubambi. Konke okugqibelele!.
Molo, ngaba unazo iifayile zokwenza okufanayo kodwa kwimodeli yethebhulethi gt-P1010
Ndenze into engalunganga, xa ndifuna ukuvula imowudi yokukhuphela, i icon yefowuni iyavela ngasekhohlo, uphawu lwesilumkiso esinxantathu omthubi phakathi, kunye ne icon yekhompyuter ngasekunene. Ndingenza ntoni?